Shariif Xasan Sheekh Aadan oo fariin aan caadi ahayn u diray madaxweyne Farmaajo (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo fariin aan caadi ahayn u diray madaxweyne Farmaajo (DHAGEYSO)
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa fariin culus oo isugu jirta hambalyo iyo bogaadin u diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo, isagoona sidoo kale ka hadlay isbedelka ka dhacay dalka iyo nidaamka dimuqraadiyadda ay ku tallaabsatay Soomaaliya.
Shariif Xasan ayaa marka hore ugu baaqay madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo inuu si taxadar leh uga fiirsado cidda uu xika ra’iisul wasaaraha dalka usoo magacaabi doonno, isagoona kula taliyay inuu soo magacaabo shaqsi soo dhisi kara xukuumad tayo leh.
Sidoo kale, Shariif Xasan ayaa Ilaahay ka baryay in isbadelka dalka ka dhacay uu noqdo mid horseedda nabad iyo barwaaqo, isagoona dhinaca kale ugu baaqay madaxda maamul goboleedyadda kale ee dalka inay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub.
Madaxweyne Farmaajo ayaa maalmihii ugu dambeysay kulamo kala duwan la yeelanaayay dhowr musharixiin oo kasoo jeeda beesha Hawiye, waxayna dhamaantood si weyn u daneynayaan inay qabtaan xilka ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, dhawaan ayaa la filayaa in madaxweyne Farmaajo uu soo magacaabo shaqsiga rasmiga ah ee noqon doonna ra’iisul wasaaraha cusub ee isaga la shaqeyn doonna mudadda 4-ta sano ee uu xilka haayo, waxaana haatan jira shaqsiyaad loo sadaalinaayo inay qabtaan xilkaas.